Nobody reviewed this site yet, be the first to tell everyone what you think about uwsa.com.
BETA We evaluate the latest social media signals (about uwsa.com)from Twitter, Facebook and Google+ to get an idea about the public opinion.
yan lin | Jul 18, 2012 - 03:45
I like too much Facebook Buzz
Moe Hommody Bazzi | Nov 23, 2012 - 01:12
UWSA PUB AND CLUB THURSDAYS! ALL NEW! Welcome to the Pub and Club! Live music at tHe DH upstairs and DJ's and Dancing at Whitestar! With DJ Erin Zonta 17+ with student ID FREE SHUTTLE FROM THE DH TO WHITESTAR 10PM-1AM NO COVER AT BOTH LOCATIONS
Cro Uwsa | Nov 22, 2012 - 17:52
What are your new and exciting suggestions for the general election in winter 2013! post or inbox your ideas, we'd love to hear them! UWSA - University of Windsor Students' Alliance
Kristian Michael Neill | Nov 22, 2012 - 17:31
UWSA PUB AND CLUB THURSDAYS! ALL NEW! Welcome to the Pub and Club! Live music at tHe DH upstairs and DJ's and Dancing at Whitestar! With DJ Erin Zonta 17+ with student ID FREE SHUTTLE FROM THE DH TO WHITESTAR 10PM-1AM
Awie Aung | Nov 22, 2012 - 14:20
အိုဘားမားနဲ့ဦးသိန်းစိန် အားစမ်းမည့်ပွဲ ယခုသတင်းအား www.photayokeking.org မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ မူရင်းသတင်းအား http://photayokeking.org/hot-news/1047-obama-thein-sein-metting-2012-november တွင်သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ယခုသတင်းကို www.facebook.co ... Theintin Aung | Nov 22, 2012 - 12:17
UWSA (သို့မဟုတ်) တရုတ်ပေါက်ကလေး “ ၀ ” ၏ မူးယစ်ဆေးဝါးဈေးကွက် | Shan News shannnews.blogspot.com စာမူများ၊ ဆောင်းပါးများ၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းသတင်းများ ရေးသားပေးပို့ လိုပါက trueshannews@gmail.com သို့ပေးပို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ...
Fery Chan Sweetbeiibe III | Nov 21, 2012 - 05:18
YauwdaLah yaahh,, Gag uwsa cariik pacar ajadeh !! ~(˘▽˘~)(~˘▽˘)~
University of Windsor | Nov 21, 2012 - 00:57
Check out UWSA's NOH8 photoshoot. Sailashio Lso | Nov 20, 2012 - 09:25
ဦးအောင်မင်းနှင့်အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံစဉ် ရရှိသောသဘောတူညီချက်အချို့ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေလို UNFC ခေါင်းဆောင်တဦးပြော Posted: 19 Nov 2012 02:31 AM PST ယခုလဆန်းကအစိုးရ၏ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးအောင်မင်းနှင့်အလွတ် သဘော တေ ...
Ashin Indapala | Nov 19, 2012 - 18:53
အိုဘားမားနဲ့ဦးသိန်းစိန် အားစမ်းမည့်ပွဲ - Sunday, 18 November 2012 ၊ www.photayokeking.org မှကူးယူဖော်ပြထားပါသည်။ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား မကြာခင် မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာတော့မည် ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အမေရိကန်သမ္မတ မစ္စတာအ ... Seng Wa | Nov 19, 2012 - 15:49
ဦးအောင်မင်းနှင့်အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံစဉ် ရရှိသောသဘောတူညီချက်အချို့ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေလို UNFC ခေါင်းဆောင်တဦးပြော Monday, November 19, 2012 Posted by သျှမ်းသံတော်ဆင့် ယခုလဆန်းကအစိုးရ၏ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးအေ ... Ko Zar | Nov 19, 2012 - 10:53
ဦးအောင်မင်းနှင့်အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံစဉ် ရရှိသောသဘောတူညီချက် အချို့ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေလို UNFC ခေါင်းဆောင်တဦးပြော Monday, 19 November 2012 ယခုလဆန်းကအစိုးရ၏ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးအောင်မင်းနှင့်အလွတ်သဘော တွေ့ဆု ... Sis Wana | Nov 19, 2012 - 10:34
မြန်မာနိုင်ငံက `ဝ´ နဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး နိုဝင်ဘာ(၁၉) ဆိုမာလီယာနဲ့ပင်လယ်ဓါးပြ၊ မြောက်ကိုးရီးယားနဲ့ နျူကလီးယား၊ ချေချင်ညာနဲ့ ရုရှား၊ မြန်မာနိုင်ငံက `ဝ´ နဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး ဆိုတဲ့ တွဲလုံးလေးတွေက ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ထည်ဝါစွာနဲ့ ကျော်ကြားနေ တာတာမဟုတ်ပေမဲ့ နိုင်ငံတကာက ...
Arakan Naylin | Nov 18, 2012 - 18:08
မူးယစ်ဆေးဝါး၊ လက်နက်ခဲယမ်းတို့ဖြင့် ရပ်တည်နေရသော UWSA 18.11.2012 မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်မျဉ်းတစ်လျှောက် နေရာယူထားသော ၀ပြည် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ UWSA သည် ဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအစပြုကာ တပ်ဖွဲ့တစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မူလရင်းမြစ်က ဗ ... Lu Maw | Nov 18, 2012 - 16:12
တောင်ပိုင်း ဝ တပ်ဖွဲ့က လယ်ယာမြေ သိမ်းယူမှု ဒေသခံများ မကျေနပ် အင်္ဂါနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 13 ရက် 2012 ခုနှစ် သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်း - သျှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်း သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းတုံမြို့နယ်အတွင်း ၀ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA) "၀" တပ်ဖွဲ့က လူထ ... Twitter Buzz shihouw | Nov 24, 2012 - 14:36
【定期】LINE→mosuko-uwsa Skype→shiho_uwsa 良かったら追加してください( ´ ▽｀)ﾉ uver_spr0325 | Nov 24, 2012 - 12:59
@sn_by_uwsa まもたんかわいすぎる(*_*)❤ uver_spr0325 | Nov 24, 2012 - 12:54
@sn_by_uwsa なんかあったの((((；ﾟДﾟ)))))))？ misakingSP | Nov 24, 2012 - 09:25
@sn_by_uwsa おはあり(*´ｴ｀*) aichigo1223 | Nov 24, 2012 - 08:11
@sn_by_uwsa つれてってください(〃'▽'〃)(〃'▽'〃)はすはす　行きたいです(*ﾟдﾟ*)！年確は勘弁でオネシャス(´･ω･`)♡ sn_by_uwsa | Nov 24, 2012 - 07:38
@aichigo1223 おいｗライブ行こうライブ(´･ω･`)今度飲みに来い(´･ω･`) camisaki512 | Nov 24, 2012 - 07:38
@sn_by_uwsa そうですねヽ(^o^)丿 sn_by_uwsa | Nov 24, 2012 - 07:37
@camisaki512 なるほど！そうですねー(´･ω･`)また会えるといいですね(*ﾟдﾟ*) daita364 | Nov 24, 2012 - 07:35
@sn_by_uwsa 女の子は20過ぎるとスキンケアしなやで～新陳代謝とな鈍るしな～ aichigo1223 | Nov 24, 2012 - 07:32
@sn_by_uwsa (´･ω･`)つGERO　私もさみちーです(; ;)今日バイトやー(; ;)しくしく sn_by_uwsa | Nov 24, 2012 - 07:32
@daita364 それすら最近とってない。なんか老けたねって言われるようになった(T_T) sn_by_uwsa | Nov 24, 2012 - 07:31
@aichigo1223 GABAくれ。絶賛ホームシック中だ。接客はこっちのが楽しく出来るよ！ camisaki512 | Nov 24, 2012 - 07:31
@sn_by_uwsa ゼルさんの母校なんでヽ(^o^)丿www　世界に飛び立つ前にもう一回来てくれないかなぁ…　って思ってます(>_<) daita364 | Nov 24, 2012 - 07:30
@sn_by_uwsa 最低４時間の睡眠ときちんとした生活なら大丈夫やと思うよ～ sn_by_uwsa | Nov 24, 2012 - 07:29
@camisaki512 優しいですよね♡本当好き♡てかなにそれめちゃくちゃ羨ましい(*ﾟдﾟ*) sn_by_uwsa | Nov 24, 2012 - 07:26
@daita364 やべええええなるべく寝るようにしよう sn_by_uwsa | Nov 24, 2012 - 07:25
むげんがはいれたいｗいろんな意味でｗ最近うばさんネタ少ない(´･ω･`)保留。 aichigo1223 | Nov 24, 2012 - 07:24
@sn_by_uwsa まいどですーん(〃'▽'〃)！　そちらの生活はどうですかー？(ToT) camisaki512 | Nov 24, 2012 - 07:23
@sn_by_uwsa wwwwwwwwwwwww　まぁ、そこは問題ではないっ!!!www　あ、あと、めっちゃ優しいっす!!!　学校にたまたま遊びに来てたときに、職員室の前で友達と二人で腰ぬかしてたんですけど、目が合ったら、ニコってしてくれて(*^^)w　とにかく優しい!!! daita364 | Nov 24, 2012 - 07:21
@sn_by_uwsa 睡眠時間が少ないと老けやすいからね(笑) Social Cloud of www.uwsa.com
window.domain = 'uwsa.com';
<a id="webutation-link" href="http://www.webutation.net/go/review/uwsa.com">uwsa.com Webutation</a>
<a id="webutation-pixelbadge-link" href="http://www.webutation.net/go/review/uwsa.com">uwsa.com Webutation</a>
Credit Card Debt Management Resources & Advice, Debt Consolidation Loan, Refinancing, Counseling Services: UWSA
Status of uwsa.com
Last checked on Jan 23, 2013 - 04:32 Website Ping Test: uwsa.com down?
© Webutation 2013 - uwsa.com